ब्रालोनक्लाकाका सिलेंडर लकमा: वर्णन, यन्त्र, प्रकार र समीक्षाहरू
हामी प्रत्येकले तपाईंको घरलाई सुरक्षित ढंगले सम्भवतः घुसपिट गरेर घुम्न खोज्छ। धेरै तरिकामा प्रवेश गर्न रोक्न सम्भव छ, तर एकै समयमा र एकै समयमा प्रभावकारी रूपमा धातुको स्थापना (वा भित्री बखत) ढोका हो। तर यस अवस्थामा पनि, 100% सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन, किनकि प्रत्येक इनपुट समूहसँग कमजोर बिन्दु छ - एउटा कीहोल। एक अनुभवी चोरले केही मिनेटमा कुनै पनि लक तोड्न सक्छ, पछि सुरक्षात्मक संरचनाले यसको सबै उपयोगी गुणहरू गुमाउँछ। तर यदि सिलिन्डर लकमा बगाएको प्याड स्थापना गरिएको छ भने, ढोकाको विश्वसनीयता र तोड्ने प्रतिरोधले बढ्दो मात्रामा वृद्धि गर्नेछ। त्यहाँ केवल एक प्रश्न मात्र छ: यसले कसरी कुञ्जीहोललाई सुरक्षित गर्दछ?
Bronenkladka एक सजावटी तत्व हो, उच्च शक्ति र पहिरन-प्रतिरोधी इस्पात को बनाइएको छ, जो भान्दर्भिक आक्रमणबाट ताला तंत्र को संरक्षण वा ड्रिलिंग वा ड्रिग्रेट गर्ने काम गर्दछ। यसको निर्माणमा, बख्तरबंद प्लेट मात्र दुई हिउँ पर्ने भागहरू छन्, जुन कुञ्जीहोल प्रवेश गर्न कुञ्जी आवश्यक छ । प्रत्येक मेनुवादको लागि यो अनुसार, मूल बख्तरहित प्याड चयन गर्न आवश्यक छ।
ब्रलोनर लकमा ब्रोनेकलालाका कुञ्जी को लागि कटआउट को एक मात्र तंत्र को तंत्र मा सुरक्षात्मक तत्वबाट अलग हुन्छ, साथ साथै घूर्णन भागहरु को उपस्थिति। दुवै प्रकार को कार्बन को अधिकतम प्रतिशत संग उच्च-बल इस्पात को बनाइन्छ, जो आवश्यक कठोरता, शक्ति र प्रभाव को बिरुद्ध सुरक्षा को लागि प्लास्टिक को समय प्रदान गर्दछ।
कवच प्लेटको उपकरण
स्ट्रक्चरलले, बख्तरबंद प्लेट तालाको आकार अनुरूप एक आकारमा एक धातु प्लेट हो। यसको आयाम मन्त्रिपरिषदको केन्द्रीय भागको लागि सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान गर्ने तरिकामा परिभाषित गरिएको छ। कोर को रक्षा गर्न को लागि, डिजाइन को एक विशेष कुंडा वॉशर छ6मिमी सम्म मोटाई संग। यो Chrome-plated steel बाट बनेको छ। ब्रान्डर लकमा ब्रोनेनकल्यालाका लागि अपार्टमेन्टको सुरक्षाको डिग्री बढ्यो, यसलाई दृढतापूर्वक फिट गर्नुपर्छ। यस उद्देश्यका लागि, साना स्पेसर तन्त्रहरू संभाला गरिन्छ जुन अस्तरको उचाई समायोजन गर्दछ। केही मोडेलहरूमा, यस्तो समायोजन पेंच हराइरहेको छ - बख्तरबंद प्लेट सीधा संलग्नसँग लक भएको छ।
एक आकर्षक उपस्थिति दिन, र ढोका को डिजाइन मा एक तत्व को "प्रवेश" गर्न को लागि, यो पीतल, पीतल, क्रोमियम र अन्य धातुहरु को रंग को लागि एक विशेष विरोधी संक्षारक संरचना संग चित्रित छ। बख्तरबंद पैड स्टोरमा खरिद गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरूका निर्माणको लागि राम्रो छ।
कर्कर प्लेटहरु को प्रकार
सबै प्रकारका सुरक्षात्मक तत्वहरू तिनीहरूको द्वारा प्रदान गरिएको सुरक्षाको स्तर अनुसार वर्गीकृत गरिन्छ। सबैभन्दा पहिले, यो अलग र अलग किस्में एकल बाहिर सार्थक छ। ब्रान्डरलाडका सिलिन्डर लकमा यसको डिजाइन दुई भागहरु छन् - यिनी मध्ये सीधै सीधै कोहिल मा स्थापित हुन्छ, र दोस्रो - ढोका को तल को तल। यस्तो प्रणालीलाई अधिक विश्वसनीय भनिन्छ, किनकि सबैभन्दा कमजोर स्थानहरू एकअर्काबाट अलग रहन्छन्।
ठोस ओवरले एक मोललिथिक प्लेट हो जसमा ह्यान्डआउट र तालाको कोर बनाइएको हो। एकै ओर, यो कम विश्वसनीय छ (एक हमलावरले ढोका उठाउन को लागी समय बढाउँदछ), तर अर्कोमा - एक ढोकामा ढोका उठाउन खोज्न सक्छ। Bronenkladki स्थापना प्रौद्योगिकी को अनुसार मा mortise र चालान मा पनि विभाजित गर्न सकिन्छ। स्थापनाको प्रत्येक विधि यसको आफ्नै विशेषताहरू छन् र अलग विचारको आवश्यकता छ।
ओभरहेड बन्डेड गरिएको प्लेटहरू
प्रस्तुत सुरक्षात्मक प्याडहरूसँग कम विश्वसनीयता र मेकेनिकल प्रभावको प्रतिरोध छ - यदि ठीक छ भने, एक आक्रमणकारीले यस्तो संरचना ढाक्न सक्छ। यो कुरा सिलिन्डर लकमा बख्तरबंद प्याड स्थापनाको ढोकाको बाहिरबाट गरिन्छ।
यो ताला लगाउने उपकरणमा सुपरमोट गरिएको छ र ढोका भित्र भित्रबाट बोल्टहरू द्वारा धातु सतहको विरुद्ध थिचिएको छ। यदि पेंच पर्याप्त मात्रामा कडा हुन्छन् भने, आवरणले इस्पात पानामा काट्न र मोल्डेड सुरक्षात्मक तत्व जस्तो बन्छ। तर व्यवहारमा, यो जस्तै केहि सधैं सम्भव छैन।
हतियार बगाएको प्लेटहरू
हतियार बगाएको अस्तरले दुई प्लेटहरू समावेश गर्दछ। यिनी मध्ये एक को दरवाजे को संरचना को बाहिर देखि सीधा कोचोल सम्म तय गरिन्छ, र दोश्रो देखि भित्र देखि स्थापित छ। कडा चोटले दुवै प्लेटहरू एक मात्र प्रणालीमा जडान गर्दछ, जसले यसलाई कुश्न असम्भव बनाउँछ। एकमात्र पछाडि, जसले सिलिन्डर लकमा काटो कवच प्लेट छ, मूल्य हो। यसको मूल्य 10 हजार रूबल सम्म पुग्न सक्छ। ओवरले प्रस्तुत गरिएको प्रकार यसको निर्माणको समयमा ढोकाको डिजाइनमा माउन्ट गर्न सकिन्छ। यस अवस्थामा, संरचना आफैलाई लक गर्न संलग्न वा धातुको आर्मेड गरिएको पानामा दफन गर्न सकिन्छ। स्थापनाको यो विधिले चोरलाई प्रतिरोध गर्दछ।
ब्रुनेनल्क्लाकी एक चुम्बकीय तंत्र संग
ब्रुनेनकोभका एक चुम्बकीय तंत्रिका साथ - तालिम तंत्र को रक्षा गर्न एक अभिनव प्रविधि। तिनीहरूको डिजाइनमा त्यहाँ एक विशेष सुरक्षात्मक टोपी छ। पूर्ण रूपमा यस बख्तरबंद पैड को कोर सिलिन्डर लक मा पहुँच ब्लक गर्दछ। संरक्षण बढ्छ, न केवल तोड्नदेखि, तर पनि भान्डाको आक्रमणबाट पनि - गहिरोमा ग्लुल्न वा म्याच राख्न राख्न काम गर्दैन।
ताला खोल्न यस डिजाईनद्वारा संरक्षित गरिएको छ, तपाइँसँग विशेष चुम्बकीय सुरक्षा कोड हुनुपर्छ, जुन सामान्यतया मास्टर कुञ्जीहरूमा बनाइन्छ। चुम्बकीय बख्तरहित पैडहरू सडकको ढोकाको सुरक्षा गर्न किन्न चाहन्छन्।
बख्तरबंद प्लेटहरू छनौट गर्न नियम
सही तरिकाले एक ब्रननबेल चयन गर्न, तपाइँलाई लक को प्रोटोडिंग भाग को व्यास र लम्बाई को पत्ता लगाउन आवश्यक छ (यदि ताला दरवाजे मा बनाइएन)। वस्तुहरू चयन गर्दा, निर्माणको सामग्रीलाई ध्यान दिनुहोस्। यो राम्रो छ, यदि यो उच्च कार्बन इस्पात हो भने, विरोधी-जंगको यौगिकहरु संग लेपित। साथै, सिलिन्डर लकमा बगाएको ढोका ढोकाको ढोकासँग मेल खान्छ। कांस्य, क्रोम, इस्पात सामान्य आकारहरू जुन कुनै डिजाइनमा फिट हुन्छ। आदेशमा एक विशाल वर्गीकरणमा गुमाउनु हुँदैन, विश्वका अग्रणी निर्माताहरूमा ध्यान दिनुहोस्। यसमा डिसेक, केले, मोटोरा, रिजident। यी निर्माताहरु को उत्पादन उच्च शक्ति कार्बन इस्पात को बनाइन्छ, जो ड्रिल गर्न सकिदैन। समेत माथिल्लो डिजाइनले मापदण्डको क्रम अनुसार प्रतिरोध स्तरलाई बढाउनेछ।
तर इटालियन निर्माताबाट सिलिन्डर लकमा Cisa बख्तरबंद प्याडमा विशेष ध्यान दिइन्छ। सुरक्षात्मक फिटिंग सिमेटेड nitrided इस्पात को बनेको छ, एक अद्वितीय डिजाइन छ र कुनै पनि कमजोरता छैन।
कोन रोड: प्रकार, आकार, उद्देश्य
लेमक्स बोइलरहरू: अवलोकन, निर्दिष्टीकरणहरू, प्रकारहरू, निर्देशनहरू र सन्दर्भहरू
कसरी एयर कंडीशनिंग लिने: चरण-दर विवरण, सुविधाहरू र सिफारिसहरू
लिओनमम जोडीहरू क्लम्पिंग गर्न प्लान
वालपेपरका प्रकारहरू: के छनौट गर्ने?
ग्याँस बयलरहरू। ताप बोइलरको प्रकार
हेमोर्रागिक फाइबर, उनीहरूको प्रकार
"लीफान Solano" - विनिर्देशों र डिजाइन चिनियाँ समाचार भएपछि
अलेक्जेन्डर Goncharov: जीवनी र फोटो
कसरी आफ्नो हात संग स्वचालित ढोका बनाउन
Suyunshalina Bibigul Aktan: जीवनी र काम
एंटी-गिपिन औषधि: प्रयोगको लागि निर्देशन
Alexei Lebedev: जीवन र कार्य
बच्चाहरु मा वायरल म्यानिअनिटाइटिस को लक्षण, जुन हरेक आमाबाबु को जान पर्छ
अपार्टमेंट गर्न सर्वश्रेष्ठ प्रवेश ढोका। राम्रो ध्वनि इन्सुलेशन संग प्रवेश ढोका
सडकको नियम मा संज्ञानात्मक क्विज
बालिका र केटाहरु: लागि बिरालोको बच्चाहरुको नाम
लामबद्ध एलजी वाशिंग मिसिन: सबै भन्दा राम्रो प्रतिनिधिहरु